Sida loo booqdo Sacuudi Carabiya UAE, South Africa, Argentina mar kale?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » Sida loo booqdo Sacuudi Carabiya UAE, South Africa, Argentina mar kale?
Airport • Wararka Argentina • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Sucuudiga ayaa qaaday xayiraadihii safarka qaarkood
Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo mar xirneyd oo dahsoon ayaa hadda loo yaqaanaa inay tahay waddanka ugu dalxiiska badan adduunka.
Dalku wuxuu safka hore kaga jiraa hoggaanka dalxiiska adduunka.
Maanta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Sacuudiga ayaa xaqiijisay inay Boqortooyada dib ugu furi doonto deriskeeda, Imaaraadka Carabta, Koonfur Afrika, iyo Argentina.
Socdaalka ayaa mar kale loo oggolaan doonaa inta u dhexeysa Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Isutagga Imaaraadka Carabta, Koonfur Afrika, iyo Argentina laga bilaabo Arbacada, Sebtember 8. Wadamadan ayaa hadda laga saaray socdaalka Boqortooyada “liis cas”.
Go'aanka lagu joojinayo xannibaadda safarka wuxuu ku saleysan yahay qiimeynta xaaladda hadda ee COVID-19 ee Boqortooyada, Wasaaradda ayaa sharraxday.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in habka looga hortegi karo caabuqa COVID-19 inuu faafo ay tahay in la sii wado ku-dhaqanka tallaabooyinka ka-hortagga, sida xirashada maaskaro, fogeynta bulshada, iyo fayadhowrka.
Laga bilaabo maanta, Talaadada, Sebtember 7, 2021, waxaa jiray 138 xaaladood oo cusub oo ah COVID-19 iyo 6 qof oo dheeraad ah ayaa u dhintey coronavirus. Ilaa hadda, 545,505 xaaladood ayaa la soo sheegay 8,591 qofna waa dhinteen.
Waxa Boqortooyadu hadda qabanayso
Waqtigan xaadirka ah, Sacuudi Carabiya ayaa riixaya olole tallaal si loo gaaro xasaanadda lo'da oo 70% dadka si buuxda loo tallaalo. Illaa iyo hadda, waddanku wuxuu gaaray 45% si buuxda loo tallaalay iyo 63% oo qaatay qiyaasta koowaad. Dawladdu waxay rajaynaysaa in la gaadho xasaanadda xoolaha horraanta Noofembar.
Ka sokow barnaamijkeeda tallaalka, waddanku wuxuu sameeyay xarumo baaritaan iyo xarumo lagu daweeyo, isagoo caawiyay boqollaal kun oo qof.
Bil iyo bar uun ka hor
Dhammaadkii bishii Luulyo 2021, Sacuudi Carabiya waxay u saartay muwaadiniinteeda xayiraad socdaal oo 3 sano ah haddii ay ku xadgudbaan xayiraadda la saaray oo ay u safraan mid ka mid ah waddamada ku jira “liiska cas” ee Boqortooyada. Ka sokow xayiraadda safarka ee 3-da sano ah, ciqaab culus ayaa la saari doonaa marka la soo laabto.
Liiska xannibaadda safarka waxaa ka mid ahaa waddammada la qaadayo berri - UAE, South Africa, iyo Argentina.
Maxaa loo baahan yahay si loogu safro Sacuudiga?
Laga bilaabo Ogosto 1, 2021, Sacuudigu wuxuu u furan yahay booqdayaasha caalamiga ah ee la tallaalay ku socdaalka fiisaha dalxiiska. Socotada ayaa sidoo kale u baahan doona inay lahaadaan caymiska COVID-19 inta ay joogaan Boqortooyada. Kharashka caymiskan waxaa lagu dari doonaa khidmadda fiisaha dalxiiska. Si aad u hubiso u -qalmitaanka waddan ee barnaamijka eVisa adoo hubinaya liiska ku yaal Bogga VisaSaudi. Dhammaan waddamada aan liis garayn waxay sidoo kale dalban karaan fiisaha dalxiiska qunsuliyadda iyagoo u maraya safaaradda Sacuudi Carabiya ee ugu dhow iyada oo loo marayo www.mofa.gov.sa
Dhammaan booqdayaasha ku yimaadda waddanka ee haysta fiisaha dalxiiska oo sax ah waa inay keenaan caddayn dhammaystiran oo ah mid ka mid ah 4 tallaal oo hadda la aqoonsaday: 2 qiyaasood oo ah tallaallada Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech ama Moderna, ama hal qiyaas tallaal oo la soo saaray waxaa qoray Johnson iyo Johnson.
Martida dhammaystay laba qiyaasood oo ah tallaallada Sinopharm ama Sinovac waa la aqbali doonaa haddii ay heleen qaddar dheeraad ah mid ka mid ah afarta tallaal ee lagu oggolaaday Boqortooyada.
Sacuudi Carabiya wuxuu leeyahay furay xariir webka si booqdayaashu u diiwaangeliyaan heerka tallaalkooda. Goobta waxaa lagu heli karaa Carabi iyo Ingiriis.
Socotada imanaya Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale looga baahan yahay inay bixiyaan tijaabo PCR oo taban oo aan la qaadin wax ka badan 72 saacadood ka hor bixitaanka iyo shahaadada tallaalka warqadda la oggolaaday, oo ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee rasmiga ah ee waddanka soo saaray.
Ma jiro shuruud karantiil oo loogu talagalay dadka socdaalka ku tallaalay Sucuudiga ee la tallaalay.
Dhammaan dadka safarka ah ee galaya fiisaha dalxiiska ee hore loo soo saaray waxaa laga rabaa inay bixiyaan lacag dheeraad ah oo ah SAR 40 gegida dayuuradaha markay yimaadaan si ay u daboolaan caymiska wixii kharash caafimaad ee la xiriira COVID-19 ah.
Socotada waxaa lagula talinayaa inay hubiyaan shuruudaha gelitaanka hadda ee diyaaradda ay doorteen ka hor inta aysan iibsan tigidh.
Yaa weli ku jira “liiska cas?”
Qaadashada 3 -da dal ee liiska laga saarayo berri, waddamada soo socda ayaan si ku -meel -gaar ah u awoodin inay u safraan Boqortooyada:
Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir caawin.visitsaudi.com.
Nortal wuxuu ku leeyahay saamiga dadka laga tirada badan yahay Talgen
60% dadka Mareykanka waxay dhahaan maaskaro ayaa halkaan jooga
Kor u kaca xad dhaafka ah ee khidmadaha garoomada diyaaradaha ayaa hakin doona hawada ...
Ukraine iyo Midowga Yurub ayaa kala saxiixday heshiis furan oo furan
WTN waxay haysaa Su'aalo Badbaado oo cusub Suuqa Socdaalka Adduunka ...
Ruushka Ayaa Dib U Bilaabay Duulimaadyadii Faransiiska Iyo Czech Republic